ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားနဲ့ ကံမဆုံတဲ့ ဂန္ထ၀င်တွေ
21 Feb 2018 . 12:38 PM
ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားဆိုတာ နတ်ကြီးသလား။ ချန်ပီယံလိဂ်လို့ အမည်ပြောင်းလဲပြီးနောက်ပိုင်း (၂)ရာသီဆက် ဗိုလ်စွဲတဲ့အသင်းမရှိတဲ့အစဉ်အလာဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ရောက်မှ ပျက်ပြယ်သွားတာ၊ ၁၉၉၉ ဗိုလ်လုပွဲမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ နောက်ဆုံးမိနစ် (၂)ဂိုးနဲ့ နိုင်ခဲ့တာ၊ ၂၀၀၅ ဗိုလ်လုပွဲမှာလီဗာပူးလ်ရဲ့ (၃)ဂိုးအရှုံးကနေပြန်လိုက်ကစားပြီး ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာတွေဟာလည်း ချန်ပီယံလိဂ်ဒိုင်ယာရီထဲက မမေ့နိုင်စရာဇာတ်လမ်းများပါပဲ။ ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ကံတရားသက်ရောက်မှုကြီးမားတယ်ဆိုတာကိုသက်သေပြခဲ့ တာတွေပါပဲ။
နာမည်ကျော်ကစားသမား၊ တချို့ဆိုဂန္ထ၀င်ကစားသမားတွေဖြစ်ပေမယ့် ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို မပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကစားသမားတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ သူတို့က ကမ္ဘာ့ဘောလုံးဇာတ်ခုံပေါ်မှာ ထင်ရှားကျော်ကြားစွာအသုံးတော်ခံနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ချန်ပီယံလိဂ်အိပ်မက်တွေ ပြိုလဲခဲ့ရသူတွေလို့ဆိုရမယ်။
နယ်သာလန်ကစားသမားတွေထဲမှာ နစ္စတယ်လ်ရွိုင်း (Nistelrooy)ဟာ သွင်းဂိုး (၆၅)ဂိုးနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲဂိုးအများဆုံးသွင်းထားသူပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲကို တစ်ကြိမ်မှမရောက်ခဲ့ ဖူးပါဘူး။ ၂၀၀၂ ခုနှစ် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့အတူ ဆီမီးဖိုင်နယ်အထိတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် လေဗာကူဆင်ကို မကျော်ဖြတ်နိုင်လို့ နစ္စတယ်ရွိုင်း ဗိုလ်လုပွဲနဲ့ ဝေးခဲ့ရတယ်။ ပိုပြီးရင်နာစရာကောင်းတာက မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကနေ ထွက်ခွာချိန်မှာ သူသွားကစားမယ့် ရီးယဲလ်က ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ဗိုလ်စွဲခဲ့ပြီး ရီးယဲလ်ကို ရောက်လာချိန်မှာ သူစွန့်ခွာခဲ့တဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်က ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ဗိုလ်စွဲခဲ့တာပါပဲ။
ဗီယာရာ(Vieira) ဟာ ပြင်သစ်ဂန္ထ၀င်ကစားသမားဖြစ်ပေမယ့် ချန်ပီယံလိဂ်တော့ မရဖူးဘူး။ ချန်ပီယံလိဂ်မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်ကို ပြောင်းခဲ့ပေမယ့် သူ့မျှော်လင့်ချက်ဟာ အကောင်အထည်မပေါ်ခဲ့ဘူး။ အာဆင်နယ်နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ကွာတားဖိုင်နယ်မှာ ပြန်ဆုံတော့ ဗီယာရာဟာ အသင်းဟောင်းပရိသတ်တွေရဲ့ လှောင်ပြောင်မှုနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသေးတယ်။ သူ့ရဲ့ကစားပုံကို ပရိသတ်တွေလှောင်ပြောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဗီယာရာအတွက် မမေ့နိုင်စရာဖြစ်နေမလားပဲ။ ဗီယာရာကလည်း ချန်ပီယံလိဂ်နဲ့ ကံမစပ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အင်တာမီလန်အသင်းမှာ ကစားခဲ့ပေမယ့် ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားဆွတ်ခူးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မတိုင်မီ အသင်းနဲ့ လမ်းခွဲခဲ့လို့ ချန်ပီယံဆုကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရခဲ့ဘူး။
ဆံပင်အရှည်ကို ကစားသမားဘ၀အချိန်အများစုမှာ စွဲမြဲစွာထားခဲ့သူ အာဂျင်တီးနားဂိုးသွင်းစက်လို့ တင်စားရမယ့် ခရက်စ်ပို (Crespo)ဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲမှာ (၂)ဂိုးသွင်းခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့ အေစီမီလန်ဟာ ပြိုင်ဘက်လီဗာပူးလ်ကို ပယ်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်မှာ အရေးနိမ့်ခဲ့လို့ ခရက်စ်ပိုရဲ့ဂိုးတွေ အလာကားဖြစ်သွားရတတယ်။ အဲဒီနောက်မှာ ချယ်လ်ဆီး၊ အင်တာမီလန်တို့မှာ သူ့ရဲ့သွင်းဂိုးတွေဆက်လက်တောက်ပနေပေမယ့် ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲကို တစ်ကြိမ်မှထပ်ကစားခွင့်မရတော့ဘူး။ ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ခရက်စ်ပိုက (၆၅)ပွဲကစားပြီး (၂၅)ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ခရက်စ်ပိုရဲ့ ဂိုးတွေဟာအောင်ပွဲနဲ့အနားသတ်ခွင့်မရတာတော့ စိတ်မကောင်းစရာပဲ။
၂၀၀၅ ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲတွင် လီဗာပူးလ်ဘက် ဂိုးသွင်းနေသူ ခရက်စ်ပို(Crespo)
၂၀၀၃ ချန်ပီယံလိဂ်ဆီမီးဖိုင်နယ်မှာ ဂျူဗင်တပ်စ်နဲ့ ရီးယဲလ်ဆုံတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီပွဲမှာ နက်ဗက်(Nedved)က မမေ့နိုင်စရာလှပတဲ့ဂိုးတစ်ဂိုးသွင်းပေးခဲ့ပြီး ဂျူဗင်တပ်စ်လည်း ဗိုလ်လုပွဲတက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆီမီးဖိုင်နယ်သွင်းဂိုသူရဲကောင်း နက်ဗက်ဟာ ရီးယဲလ်တောင်ပံကစားသမား မက်မနာမန်(Mc Manaman) ကိုကစားပုံကြမ်းခဲ့လို့ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရလို့ ဗိုလ်လုပွဲနဲ့ ဝေးခဲ့ရတယ်။ဗိုလ်လုပွဲမှာ နက်ဗက်မပါတာဟာ ဂျူဗင်တပ်စ်ကို အားနည်းစေပြီး နောက်ဆုံးအေစီမီလန်ကို ပယ်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်နဲ့ ရှုံးခဲ့ရတယ်။ နက်ဗက်လည်း Hero ကနေ Zero ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့အတွက်ကျေနပ်စရာက အဲဒီနှစ်မှာ Bakkon d’ Or ဆုကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာပါပဲ။
၂၀၀၆ ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံအီတလီအသင်းရဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်တဲ့ ကင်နာဗာရို(Cannavaro)လည်း ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားမရဖူးဘူး။ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားမရဘဲနဲ့ Ballon d’ Or ဆုကို ဆွတ်ခူးနိုင်တဲ့ နောက်ဆုံးကစားသမားဟာ ကင်နာဗာရိုပါပဲ။ အင်တာမီလန်၊ အေစီမီလန်အသင်းးတို့နဲ့ အတူ ချန်ပီယံလိဂ်ဆီးဖိုင်နယ်ကစားခဲ့ပေမယ့် သူ့ရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ချန်ပီယံမျှော်လင့်ချက် မရှင်သန်ခဲ့ပါဘူး။
ဘားကမ့်(Bergkamp)ဆိုတာ ပြိုင်ဘက်ကစားသမားတွေကို လှလှပပလှည့်ဖျုား။ မမေ့နိုင်စရာဂိုးတွေသွင်းယူခဲ့ သူပေါ့။ သူဟာ အာဆင်နယ်နဲ့အတူ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲကစားခွင့်ရခဲ့ပေမယ့် ကံမကောင်းခဲ့ပါဘူး။ ဘာစီလိုနာနဲ့ကစားခဲ့ရမှာ အာဆင်နယ်ဂိုးသမား လေးမန်း(Lehmann) ထုတ်ပယ်ခံရလို့ ဂိုးသမားတစ်ဦးပြန်လည်အစားထိုးခဲ့ရပါတယ်။ အာဆင်နယ်နည်းပြ ၀င်းဂါး(Wenger) အတွက် ဒါဟာ နည်းစနစ်အကျပ်အတည်းဖြစ်ခဲ့သလို၊ ဘားကမ့်လည်း ကစားခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို မပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပေမယ့် အေဂျက်စ်၊ အင်တာမီလန်အသင်းတွေနဲ့အတူ UEFA Cup (ယူရိုပါလိဂ်) (၂)ကြိမ် ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားမရတာဟာ ဘားကမ့်ရဲ့ကစားသမားဘ၀မှာ စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဘာတစ္စတူတာ(Batistuta)၊ ဘာတီဂိုး၊ ပြင်းထန်တိကျတဲ့ကန်ချက်များပိုင်ရှင်ဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားမရဖူးရုံသာမကဘဲ ချန်ပီယံလိဂ် ရှုံးထွက်အဆင့်ကိုတောင် တစ်ကြိမ်မှမရောက်ခဲ့ဖူးပါဘူး။ စီးရီးအေပြိုင်ပွဲနဲ့အတူ၊ အာဂျင်တီးနားနဲ့အတူ မမေ့နိုင်စရာတိုက်စစ်မှူးဘ၀ကို တည်ထောင်နိုင်ခဲ့သူအတွက် ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားမရဖူးတာဟာ အကြီးမားဆုံးကွက်လပ်လို့ ဆိုရမယ်။
ချန်ပီယံလိဂ် (၁၅)ရာသီကစား၊ ပွဲပေါင်း (၁၂၄)ပွဲ၊ သွင်းဂိုး (၄၈)ဂိုး ရေးထိုးထားနိုင်သူဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို မရဖူးဘူးဆိုတာ အံ့အားသင့်စရာပဲ။ ဘာစီလိုနာ၊ အေဂျက်စ်၊ အေစီမီလန်၊ ဂျူဗင်တပ်စ်၊ အင်တာမီလန်၊ PSGအသင်းတွေနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ကွာတားဖိုင်နယ်၊ ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်ကိုသာရောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ချန်ပီယံလိဂ်ရှုံးထွက်အဆင့် ပွဲ(၄၀)ကစားခဲ့ရာမှာ (၁၀)ဂိုးအထိသွင်းယူထားနိုင်သူအတွက် ချန်ပီယံအောင်ပွဲရဲ့ ချိုမြိန်မှုကို မခံစားခဲ့ရပါဘူး။ ကစားသမားဘ၀မှာ ကျင်လည်နေဆဲဖြစ်လို့ သူ့အတွက် အခွင့်အရေးရှိဦးမလား။
၂၀၀၃၊ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွေမှာ ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲအဆင့်ကို ဘူဖွန်(Buffon) တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အကြိမ်တိုင်းမှာ ဒုတိယလူအဖြစ်နဲ့သာကျေနပ်ခဲ့ရတယ်။ ဘူဖွန်ကိုယ်တိုင်လည်း ကစားသမားဘ၀အဆုံးမသတ်မီမှာ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားရချင်တယ်လို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဝန်ခံထားပါတယ်။ ၂၀၀၃ ဗိုလ်လုပွဲမှာ ပယ်နယ်တီနဲ့ ရှုံးခဲ့တာဟာ နာကျင်စရာအကောင်းဆုံးပါပဲလို့ ဘူဖွန်က ဆွေးမြေ့စွာ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဆုများကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့သူဟာ ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ပွဲ(၄၀)ကစားခဲ့တယ်ဆိုရင် ယုံနိုင်ပါ့မလား။ PSV ၊ အင်တာမီလန်၊ ဘာစီလိုနာ၊ ရီးယဲလ်၊ အေစီမီလန်အသင်းတွေနဲ့ ဥရောပဘောလုံးလောကမှာကျင်လည်ခဲ့ပေမယ့် ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲအောင်မြင်မှုဟာ ဗလာနတ္တိပါပဲ။ ၁၉၉၇ ၊ ၂၀၀၂ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုတွေကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့သူရဲ့ အိပ်မက်တွေကိုဒဏ်ရာပြဿနာက ထိုးနှက်ခဲ့တယ်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ ရီးယဲလ်မှာကစားခဲ့စဉ်က မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ ကွာတားဖိုင်နယ်မှာ ရော်နယ်လ်ဒို(Ronaldo) ဟက်ထရစ်သွင်းနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူရဲ့ရီးယဲလ်အသင်းစာ ဆီမီးဖိုင်နယ်မှာ ဂျူဗင်တပ်စ်ကို ရှုံးခဲ့တယ်။ နောက်တစ်နှစ်အကြာမှာလည်း ရီးယဲလ်ဟာ မိုနာကိုနဲ့သာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပေမယ့် ရှုံးနိမ့်ခဲ့လို့ ဗိုလ်လုပွဲနဲ့ လွဲချော်ခဲ့ပြန်တယ်။ အသက် (၂၉)နှစ်အရွယ်မှာ ရော်နယ်လ်ဒိုဟာ သူ့ရဲ့ချန်ပီယံလိဂ်နောက်ဆံးပွဲကို ကစားခဲ့ပြီး အောင်မြင်ခြင်းမရှိမှတ်တမ်းဆိုးနဲ့သာ အဆုံးသတ်ခဲ့ရတယ်။
ခနျြပီယံလိဂျဖလားနဲ့ ကံမဆုံတဲ့ ဂန်ထဝငျတှေ
ခနျြပီယံလိဂျဖလားဆိုတာ နတျကွီးသလား။ ခနျြပီယံလိဂျလို့ အမညျပွောငျးလဲပွီးနောကျပိုငျး (၂)ရာသီဆကျ ဗိုလျစှဲတဲ့အသငျးမရှိတဲ့အစဉျအလာဟာ ၂၀၁၇ ခုနှဈရောကျမှ ပကျြပွယျသှားတာ၊ ၁၉၉၉ ဗိုလျလုပှဲမှာမနျခကျြစတာယူနိုကျတကျရဲ့ နောကျဆုံးမိနဈ (၂)ဂိုးနဲ့ နိုငျခဲ့တာ၊ ၂၀၀၅ ဗိုလျလုပှဲမှာလီဗာပူးလျရဲ့ (၃)ဂိုးအရှုံးကနပွေနျလိုကျကစားပွီး ခနျြပီယံဖွဈခဲ့တာတှဟောလညျး ခနျြပီယံလိဂျဒိုငျယာရီထဲက မမနေို့ငျစရာဇာတျလမျးမြားပါပဲ။ ခနျြပီယံလိဂျမှာ ကံတရားသကျရောကျမှုကွီးမားတယျဆိုတာကိုသကျသပွေခဲ့ တာတှပေါပဲ။
နာမညျကြျောကစားသမား၊ တခြို့ဆိုဂန်ထဝငျကစားသမားတှဖွေဈပမေယျ့ ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို မပိုငျဆိုငျခဲ့ဖူးတဲ့ ကစားသမားတှလေညျး ရှိနပေါတယျ။ သူတို့က ကမ်ဘာ့ဘောလုံးဇာတျခုံပျေါမှာ ထငျရှားကြျောကွားစှာအသုံးတျောခံနိုငျခဲ့ပမေယျ့ ခနျြပီယံလိဂျအိပျမကျတှေ ပွိုလဲခဲ့ရသူတှလေို့ဆိုရမယျ။
နယျသာလနျကစားသမားတှထေဲမှာ နစ်စတယျလျရှိုငျး (Nistelrooy)ဟာ သှငျးဂိုး (၆၅)ဂိုးနဲ့ ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲဂိုးအမြားဆုံးသှငျးထားသူပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ သူဟာ ခနျြပီယံလိဂျဗိုလျလုပှဲကို တဈကွိမျမှမရောကျခဲ့ ဖူးပါဘူး။ ၂၀၀၂ ခုနှဈ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျနဲ့အတူ ဆီမီးဖိုငျနယျအထိတကျရောကျနိုငျခဲ့ပမေယျ့ လဗောကူဆငျကို မကြျောဖွတျနိုငျလို့ နစ်စတယျရှိုငျး ဗိုလျလုပှဲနဲ့ ဝေးခဲ့ရတယျ။ ပိုပွီးရငျနာစရာကောငျးတာက မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျကနေ ထှကျခှာခြိနျမှာ သူသှားကစားမယျ့ ရီးယဲလျက ခနျြပီယံလိဂျမှာ ဗိုလျစှဲခဲ့ပွီး ရီးယဲလျကို ရောကျလာခြိနျမှာ သူစှနျ့ခှာခဲ့တဲ့ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျက ခနျြပီယံလိဂျမှာ ဗိုလျစှဲခဲ့တာပါပဲ။
ဗီယာရာ(Vieira) ဟာ ပွငျသဈဂန်ထဝငျကစားသမားဖွဈပမေယျ့ ခနျြပီယံလိဂျတော့ မရဖူးဘူး။ ခနျြပီယံလိဂျမြှျောလငျ့ခကျြနဲ့ ဂြူဗငျတပျဈကို ပွောငျးခဲ့ပမေယျ့ သူ့မြှျောလငျ့ခကျြဟာ အကောငျအထညျမပျေါခဲ့ဘူး။ အာဆငျနယျနဲ့ ခနျြပီယံလိဂျကှာတားဖိုငျနယျမှာ ပွနျဆုံတော့ ဗီယာရာဟာ အသငျးဟောငျးပရိသတျတှရေဲ့ လှောငျပွောငျမှုနဲ့ ရငျဆိုငျခဲ့ရသေးတယျ။ သူ့ရဲ့ကစားပုံကို ပရိသတျတှလှေောငျပွောငျခဲ့တာဖွဈပွီး ဗီယာရာအတှကျ မမနေို့ငျစရာဖွဈနမေလားပဲ။ ဗီယာရာကလညျး ခနျြပီယံလိဂျနဲ့ ကံမစပျသူတဈဦးဖွဈပွီး အငျတာမီလနျအသငျးမှာ ကစားခဲ့ပမေယျ့ ခနျြပီယံလိဂျဖလားဆှတျခူးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ခုနှဈမတိုငျမီ အသငျးနဲ့ လမျးခှဲခဲ့လို့ ခနျြပီယံဆုကို ပိုငျဆိုငျခှငျ့မရခဲ့ဘူး။
ဆံပငျအရှညျကို ကစားသမားဘဝအခြိနျအမြားစုမှာ စှဲမွဲစှာထားခဲ့သူ အာဂငျြတီးနားဂိုးသှငျးစကျလို့ တငျစားရမယျ့ ခရကျဈပို (Crespo)ဟာ ခနျြပီယံလိဂျဗိုလျလုပှဲမှာ (၂)ဂိုးသှငျးခဲ့ဖူးပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သူပါဝငျကစားခဲ့တဲ့ အစေီမီလနျဟာ ပွိုငျဘကျလီဗာပူးလျကို ပယျနယျတီအဆုံးအဖွတျမှာ အရေးနိမျ့ခဲ့လို့ ခရကျဈပိုရဲ့ဂိုးတှေ အလာကားဖွဈသှားရတတယျ။ အဲဒီနောကျမှာ ခယျြလျဆီး၊ အငျတာမီလနျတို့မှာ သူ့ရဲ့သှငျးဂိုးတှဆေကျလကျတောကျပနပေမေယျ့ ခနျြပီယံလိဂျဗိုလျလုပှဲကို တဈကွိမျမှထပျကစားခှငျ့မရတော့ဘူး။ ခနျြပီယံလိဂျမှာ ခရကျဈပိုက (၆၅)ပှဲကစားပွီး (၂၅)ဂိုးသှငျးယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ခရကျဈပိုရဲ့ ဂိုးတှဟောအောငျပှဲနဲ့အနားသတျခှငျ့မရတာတော့ စိတျမကောငျးစရာပဲ။
၂၀၀၅ ခနျြပီယံလိဂျဗိုလျလုပှဲတှငျ လီဗာပူးလျဘကျ ဂိုးသှငျးနသေူ ခရကျဈပို(Crespo)
၂၀၀၃ ခနျြပီယံလိဂျဆီမီးဖိုငျနယျမှာ ဂြူဗငျတပျဈနဲ့ ရီးယဲလျဆုံတှခေဲ့ပါတယျ။ အဲဒီပှဲမှာ နကျဗကျ(Nedved)က မမနေို့ငျစရာလှပတဲ့ဂိုးတဈဂိုးသှငျးပေးခဲ့ပွီး ဂြူဗငျတပျဈလညျး ဗိုလျလုပှဲတကျခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဆီမီးဖိုငျနယျသှငျးဂိုသူရဲကောငျး နကျဗကျဟာ ရီးယဲလျတောငျပံကစားသမား မကျမနာမနျ(Mc Manaman) ကိုကစားပုံကွမျးခဲ့လို့ ထုတျပယျခံခဲ့ရလို့ ဗိုလျလုပှဲနဲ့ ဝေးခဲ့ရတယျ။ဗိုလျလုပှဲမှာ နကျဗကျမပါတာဟာ ဂြူဗငျတပျဈကို အားနညျးစပွေီး နောကျဆုံးအစေီမီလနျကို ပယျနယျတီအဆုံးအဖွတျနဲ့ ရှုံးခဲ့ရတယျ။ နကျဗကျလညျး Hero ကနေ Zero ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ သူ့အတှကျကနြေပျစရာက အဲဒီနှဈမှာ Bakkon d’ Or ဆုကို ပိုငျဆိုငျခဲ့တာပါပဲ။
၂၀၀၆ ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံအီတလီအသငျးရဲ့ အသငျးခေါငျးဆောငျကောငျးဖွဈတဲ့ ကငျနာဗာရို(Cannavaro)လညျး ခနျြပီယံလိဂျဖလားမရဖူးဘူး။ ခနျြပီယံလိဂျဖလားမရဘဲနဲ့ Ballon d’ Or ဆုကို ဆှတျခူးနိုငျတဲ့ နောကျဆုံးကစားသမားဟာ ကငျနာဗာရိုပါပဲ။ အငျတာမီလနျ၊ အစေီမီလနျအသငျးးတို့နဲ့ အတူ ခနျြပီယံလိဂျဆီးဖိုငျနယျကစားခဲ့ပမေယျ့ သူ့ရဲ့ ခနျြပီယံလိဂျ ခနျြပီယံမြှျောလငျ့ခကျြ မရှငျသနျခဲ့ပါဘူး။
ဘားကမျ့(Bergkamp)ဆိုတာ ပွိုငျဘကျကစားသမားတှကေို လှလှပပလှညျ့ဖြုား။ မမနေို့ငျစရာဂိုးတှသှေငျးယူခဲ့ သူပေါ့။ သူဟာ အာဆငျနယျနဲ့အတူ ၂၀၀၅ ခုနှဈမှာ ခနျြပီယံလိဂျဗိုလျလုပှဲကစားခှငျ့ရခဲ့ပမေယျ့ ကံမကောငျးခဲ့ပါဘူး။ ဘာစီလိုနာနဲ့ကစားခဲ့ရမှာ အာဆငျနယျဂိုးသမား လေးမနျး(Lehmann) ထုတျပယျခံရလို့ ဂိုးသမားတဈဦးပွနျလညျအစားထိုးခဲ့ရပါတယျ။ အာဆငျနယျနညျးပွ ဝငျးဂါး(Wenger) အတှကျ ဒါဟာ နညျးစနဈအကပျြအတညျးဖွဈခဲ့သလို၊ ဘားကမျ့လညျး ကစားခှငျ့မရခဲ့ပါဘူး။ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို မပိုငျဆိုငျခဲ့ပမေယျ့ အဂေကျြဈ၊ အငျတာမီလနျအသငျးတှနေဲ့အတူ UEFA Cup (ယူရိုပါလိဂျ) (၂)ကွိမျ ပိုငျဆိုငျခဲ့ပါတယျ။ ခနျြပီယံလိဂျဖလားမရတာဟာ ဘားကမျ့ရဲ့ကစားသမားဘဝမှာ စိတျပကျြစရာဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ဘာတစ်စတူတာ(Batistuta)၊ ဘာတီဂိုး၊ ပွငျးထနျတိကတြဲ့ကနျခကျြမြားပိုငျရှငျဟာ ခနျြပီယံလိဂျဖလားမရဖူးရုံသာမကဘဲ ခနျြပီယံလိဂျ ရှုံးထှကျအဆငျ့ကိုတောငျ တဈကွိမျမှမရောကျခဲ့ဖူးပါဘူး။ စီးရီးအပွေိုငျပှဲနဲ့အတူ၊ အာဂငျြတီးနားနဲ့အတူ မမနေို့ငျစရာတိုကျစဈမှူးဘဝကို တညျထောငျနိုငျခဲ့သူအတှကျ ခနျြပီယံလိဂျဖလားမရဖူးတာဟာ အကွီးမားဆုံးကှကျလပျလို့ ဆိုရမယျ။
ခနျြပီယံလိဂျ (၁၅)ရာသီကစား၊ ပှဲပေါငျး (၁၂၄)ပှဲ၊ သှငျးဂိုး (၄၈)ဂိုး ရေးထိုးထားနိုငျသူဟာ ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို မရဖူးဘူးဆိုတာ အံ့အားသငျ့စရာပဲ။ ဘာစီလိုနာ၊ အဂေကျြဈ၊ အစေီမီလနျ၊ ဂြူဗငျတပျဈ၊ အငျတာမီလနျ၊ PSGအသငျးတှနေဲ့ ခနျြပီယံလိဂျကှာတားဖိုငျနယျ၊ ဆီမီးဖိုငျနယျအဆငျ့ကိုသာရောကျခဲ့ဖူးပါတယျ။ ခနျြပီယံလိဂျရှုံးထှကျအဆငျ့ ပှဲ(၄၀)ကစားခဲ့ရာမှာ (၁၀)ဂိုးအထိသှငျးယူထားနိုငျသူအတှကျ ခနျြပီယံအောငျပှဲရဲ့ ခြိုမွိနျမှုကို မခံစားခဲ့ရပါဘူး။ ကစားသမားဘဝမှာ ကငျြလညျနဆေဲဖွဈလို့ သူ့အတှကျ အခှငျ့အရေးရှိဦးမလား။
၂၀၀၃၊ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၇ ခုနှဈတှမှော ခနျြပီယံလိဂျဗိုလျလုပှဲအဆငျ့ကို ဘူဖှနျ(Buffon) တကျရောကျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အကွိမျတိုငျးမှာ ဒုတိယလူအဖွဈနဲ့သာကနြေပျခဲ့ရတယျ။ ဘူဖှနျကိုယျတိုငျလညျး ကစားသမားဘဝအဆုံးမသတျမီမှာ ခနျြပီယံလိဂျဖလားရခငျြတယျလို့ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးဝနျခံထားပါတယျ။ ၂၀၀၃ ဗိုလျလုပှဲမှာ ပယျနယျတီနဲ့ ရှုံးခဲ့တာဟာ နာကငျြစရာအကောငျးဆုံးပါပဲလို့ ဘူဖှနျက ဆှေးမွစှေ့ာ ဆိုခဲ့ပါတယျ။
ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံဆုမြားကို ဆှတျခူးနိုငျခဲ့သူဟာ ခနျြပီယံလိဂျမှာ ပှဲ(၄၀)ကစားခဲ့တယျဆိုရငျ ယုံနိုငျပါ့မလား။ PSV ၊ အငျတာမီလနျ၊ ဘာစီလိုနာ၊ ရီးယဲလျ၊ အစေီမီလနျအသငျးတှနေဲ့ ဥရောပဘောလုံးလောကမှာကငျြလညျခဲ့ပမေယျ့ ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲအောငျမွငျမှုဟာ ဗလာနတ်တိပါပဲ။ ၁၉၉၇ ၊ ၂၀၀၂ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးကစားသမားဆုတှကေို ဆှတျခူးနိုငျခဲ့သူရဲ့ အိပျမကျတှကေိုဒဏျရာပွဿနာက ထိုးနှကျခဲ့တယျ။ ၂၀၀၃ ခုနှဈ၊ ရီးယဲလျမှာကစားခဲ့စဉျက မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျနဲ့ ကှာတားဖိုငျနယျမှာ ရျောနယျလျဒို(Ronaldo) ဟကျထရဈသှငျးနိုငျခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ သူရဲ့ရီးယဲလျအသငျးစာ ဆီမီးဖိုငျနယျမှာ ဂြူဗငျတပျဈကို ရှုံးခဲ့တယျ။ နောကျတဈနှဈအကွာမှာလညျး ရီးယဲလျဟာ မိုနာကိုနဲ့သာ ရငျဆိုငျခဲ့ရပမေယျ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့လို့ ဗိုလျလုပှဲနဲ့ လှဲခြျောခဲ့ပွနျတယျ။ အသကျ (၂၉)နှဈအရှယျမှာ ရျောနယျလျဒိုဟာ သူ့ရဲ့ခနျြပီယံလိဂျနောကျဆံးပှဲကို ကစားခဲ့ပွီး အောငျမွငျခွငျးမရှိမှတျတမျးဆိုးနဲ့သာ အဆုံးသတျခဲ့ရတယျ။
by Ko Kyue . 52 mins ago
by Ko Kyue .7hours ago